Iifom zeNkundla zeTaltare
I-intlanzi yohlobo lwe-Taoist lwenziwa ngumbingelelo waseTaoist-ukubonakaliswa kwangaphandle kwe- Taoist cosmology kunye neenkqubo zangaphakathi ze-Alchemical osebenzayo ehamba endleleni yokungafi. Ulungiselelo oluthile lwesibingelelo luhluka ukusuka kwihlelo ukuya kwihlelo kwaye lithatha iifom ezahlukeneyo ngokubhekiselele kwisithethe esithile okanye umkhosi owenziwe. Kukho izinto ezithile, nangona kunjalo, ehlala ikhona, kwaye isimboli saso sihlala sisigxina, kungakhathaliseki ukuba yintoni na isithethe esithathayo.
Ebekwe kwisibingelelo, phambi komfanekiso okanye umfanekiso wesimo soBuhlonipho, yiLampu engcwele, emele ukukhanya kweTao (ingcambu yeWuji). Oku kukhanya kweTao, njengeyona nkwenkwezi eqaqambileyo, kukhanya kabini esibhakabhakeni-kukhanyisa yonke i-cosmos-kunye nomzimba womntu-ukukhanyisa iMveli yethu yasekuqaleni. Ngokwe-Inner Alchemy, ibizwa ngokuba yi-Golden pilill okanye i-Elixir yokungafi. Ayikaze ivule, ayiyi kucima, ukususela ekukhanyeni kweTo-Primordial Wisdom-ihlala ingaphendulwanga ngonaphakade kwindalo nokudalwa.
Ngakwesobunxele nangakwesokudla seLanga eliNgcwele ngamakhandlela amabini amade amela inyanga / Yin kunye nelanga / iYang. Ngokomzimba womntu, ikhandlela ezimbini ziyi-original (Yuan Qi) kunye nobomi (Hou Tian Qi), kunye namabini amabini. Ngolwimi lwe-Inner Alchemy, yiyo "i-Green Dragon ne-White Tiger ekhupha kwiHolo leNgcono."
Ngaphambi kweLampu engcwele yizinto ezintathu. Inkomishi ngakwesobunxele iqukethe amanzi, emele uYang, okanye amandla okuvelisa abantu. Inkomishi ngakwesokudla iqukethe itiye, emele iYin, okanye amandla okuvelisa amabhinqa. Ikobe yezikole iqule iigrafu zerayisi ezingasuki, ezimele umanyano we-Yin kunye neYang-ekubeni irayisi, ukuze ikhule, ithatha amandla omhlaba womhlaba / Yin kunye ne-Sky / Yang.
Izicwangciso Ezihlanu Zesiqhamo
Ngaphambi kweethathu izindebe zifakwe izitya ezihlanu zeziqhamo kunye nezitya ezintlanu zokutya. Iiplati zeziqhamo zimela izinto ezinhlanu (ukhuni, umlilo, umhlaba, isinyithi kunye namanzi) kwi-frensi yabo yangaphambi kokubeletha, okanye eYaphambi kwasezulwini, ebonakaliswe ngobuhlobo bokudala / bokuxhasa phakathi kwezinto. Izitya zokutya zimela izinto ezinhlanu kwi-post-birth, okanye iFomu yaseYe- beni yangaphambili, ephawulwe ngobuhlobo obunobungozi / obungalinganiyo phakathi kwezinto.
Ngaphambi kwamacwecwe amahlanu kunye nezitya ezintlanu ziqhumisela iziqhumiso, ezimele indawo engaphantsi yomzimba womntu, ebizwa ngokuthi "isitofu" okanye i-Dantian ephantsi. Yilapho-ekuqhutyweni kwe-Inner Alchemy-heat, eyenziwa ukuhlambulula nokucocisa i- Treasure Yintathu (Jing, Qi & Shen) -iindidi zamandla ezitholakalayo emzimbeni womntu. Ukufakwa ngaphakathi kwesiqhumiso sesibingelelo kukho iintonga ezintathu zeqhumiso, ezibhekiselele ezi Zintathu.
I-Immortals Of Taoism
Ops Special Paintball
I-Biography ye-Anton Chekhov
Itayela eGreen yaseJapan
I-Socialology yoMsebenzi kunye neShishini
UGeorge Lopez - I-Biography
Indawo yeKoster - Ephilayo iminyaka eyi-9 000 kuMlambo ongaphantsi kwe-Illinois
I-Dinosaurs ebaluleke kakhulu e-Australia kunye ne-Antarctica
I-Teutonic War Battle of Grunwald (iTannenberg)